Adinoy Ny Rano Mangatsiaka. Mihantsy ireo Mpanao Politika ireo Mponin’ny Tanàna Ambany Mba Handeha Amin’ny Fitateram-bahoaka Ao Anatin’ny Ora Fiaingàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2014 15:37 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Español, Ελληνικά, English
@rexremitio: Tsy toy ny mpanao politika, miatrika isanandro ny #MTRChallenge (FanambyMRT) ireo mponina eny amin'ny tanàna ambany tao amin'ny Metro Manila
Tsy faly tamin'ny famalian'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ao Filipina ny Ice Bucket Challenge (Fanambin'ny Rano iray Tavy) ireo mpisera ety anaty aterineto ka sahy nihantsy ireo mpiasam-panjakana manana toerana ambony mba handray anjara amin'ny #MRTRushHourChallenge (#MRTManenjikaOraFidirana) sy #PNRRushHourChallenge (#PNRManenjikaOraFidirana).
Niantsoin'ireo mpampiasa aterineto ireo mpiasam-panjakana mba handeha amin'ny Lamasinina Mpitatitra any ambanin'ny Tany (MRT) sy Fitaterana an-dalamby Nasionaly ao Filipina (PNR), izay mamakivaky ny faritry ny renivohitry ny firenena, mandritra ny ora fiaingàna (maha-be olona) mba hiainan'izy ireo ny fijaliana mahazo ireo mpampiasa izany isanandro.
Eo am-pelatanan'ny orinasa tsy miankina “MRT Corporation” ary iarahany mampiasa amin'ny Ministeran'ny Fitanteram-bahoaka, olan'ny MRT ny halaviran-dàlana izay maharitra adiny 4, ny olana ara-tekinika, ary ny fiaran-dalamby manao fatran-tsaonjo (mihizina).
Mandritra izany fotoana izany, itarainan'ireo mpandeha amin'ny PNR-panjakana ny faharatsian'ny tolotra raha ny fanjakana kosa mbola manohy manome vola tsy ampy foana ho an'ny lalamby ao amin'ny firenena.
Tafiditra tao anatin'ny loza iray niseho vao haingana tamin'ny 13 Aogositra ihany koa ny MRT rehefa niala ny lalamby ny iray tamin'ireo fiarany, izay nandratra sasantsasany tamin'ireo mpandeha taminy.
Sary natolotr'i : @PUPmemes.
Miantso ny Filoha Benigno ‘Noynoy’ Aquino III mba hanery ireo mpiasam-panjakana handeha amin'ny fitateram-baahoaka, na dia indray mandeha isam-bolana aza, ny fitakiana iray nataon'i Dinna Dayao ao amin'ny tranonkala Change.org. Nahazo sonia maherin'ny 12.000 io fitakiana io.
Nandray anjara tamin'ny #MRTChallenge ny Loholona Grace Poe. Nomen'ireo mpampiasa aterineto tsiny kosa ny Sekretera ao amin'ny Fitaterana, Jun Abaya tamin'ny nandraisany ny fiara natao ho an'ireo beantitra sy olona manana kilema nandritra ny ora naha-vitsy ny mpandeha, narahana mpiambina manokana, ary niaraka tamin'ny mpanao gazety maro. Tsy nanaiky hanao ilay fanamby ny Filoha Aquino.
Ireto misy fihetseham-po vitsivitsy ao amin'ny Twitter izay mampiseho ny fahasorenan'ireo mpandeha lamasinina ao amin'ny Metro Manila:
Fandehanana MRT, toy ny dokambarotra: tsy nahatratra anay ianareo raha hoe mila manao izany mba hahatakàrana tsara ny mahazo anay.
Raha sitrakareo. Tsy manaporofo na inona na inona ny fandehananareo lamasinina indray mandeha. Raha tsy hoe … mila fanarahan'ny media manokana ireo mpanao politika.#MRTChallenge
Fanambin'ny tavy misy ranomandry, ary dia nataon'ireo mpiasam-panjakantsika izany. nanaiky mora ny hanao ny fanamby izy ireo, naninona no tsy #PNRRushHourChallenge?
Toy ny nataon'i DOCT Abaya, fitsangatsanganana “nahafinaritra” ny nandeha tamin'ny MRT. Oayyy e. O ry lery e, tamin'ny ora tsy naha-be ny mpandeha no mba nanaovanao izany, mba nanara-poana ireo manodidina anao ialahy lesy a.
Na dia ny fandehanan'ny [Sekreteram-Pitanterana] Abaya tamin'ny MRT aza dia nahazo ny fandrakofan'ny mpanao gazety. Tokony ho kilalao mahazatra aza ho an'ireo avy any amin'ny tanàna ambany ny hoe : tadiavo ao anatin'ny MRT i Abaya.
Tokony hamaky sy hikaroka aloha ireo izay manolotra hevitra fa ny “fisondrotan'ny saran-dàlana” sy ny fisintahan'ny fanjakàna no vaha-olana amin'ireo fijalian'ny MRT. Tsy miankina ny MRT, hofain'ny Filipina.
Maneho tranga iray mazava amin'ny fanoherana ny PPP [Fiaraha-miasan'ny Fanjakana Sy ny tsy Miankina] ny MRT, toe-javatra iray ilaina saintsainina hanoherana ny anganongano momba ny herin'ny sehatra tsy miankina.
adinoy ny #MRTChallenge. Mihantsy ireo mpanao politika aho mba hanazava ny harenareo. amin'izay fantatray ny fomba fividianana trano amin'ny alalan'ny karaman'ny olona iray mpanao politika.
Maridrefy ahitàna ny halalin'ny fitomboan'ny fahasorenan'ireo mpandeha amin'ny rafitra fitateram-bahoaka tsy miankina ao amin'ny firenena ny lazan'ireny ora fiaingàna (maha-be mpandeha) ireny. Mila manome valiny amin'ilay fanamby haingana ireo manampahefana amin'ny alalan'ny famahàna ireo olana mahazo ny tolotra fitaterana amin'ny lamasinina ao amin'ny renivohitry ny firenena